Yintoni oya kuyenza xa umntu enika isondo ngosuku lokuqala? Kwiimeko ezininzi, ukuphendula kwangowesifazane kuqala kukukhuza okukrakra kunye nentukuthelo awayephosakeleyo ngendoda efikeleleka kalula. Ukuphuma kwimeko kunye nesidima kunye nokungabonakalisi ukukhukhumeza kwamadoda kuya kunceda iziphakamiso ezichanekileyo. Ungacacisa njani ngokucacileyo umntu ukuba kutheni ungafuni ukulala ngesondo lokuqala?
Kunene ukutsho ukuba awulungele ngoku. Musa nje ukungena ekucingeni kwexesha elide, qulunqa iingcinga ngokukhawuleza. Ukusuka kumbuzo othi "nini?" Kungcono ukuphepha, kungenjalo indoda yabeka ingqalelo kwiikethi kule ngxaki. Yaye uya kukukhumbula oku.
Chaza ukuba lo ngumgaqo wakho. Isikhundla esichaziweyo asiyi kubangela ukucaphukisa kwaye asiyi kumkhawulelana nendoda. Ngokuchasene noko, amadoda ahlonipha imigaqo yabantu kunye nokukwazi ukukhusela iimfuno zabo. Akufuneki ukunyanisela kwesi sihloko, kuba siphelelwe ngumxholo oyingozi wesifazane. Kwaye ukuthetha ngokuzimela kwabo akufanelekanga kumhla wokuqala.
Yenza sengathi awuqondi iziphakamiso zakhe kwaye uguqulele ingxoxo kwezinye izihloko. Le ndlela yindlela elula yokuphepha ukuchazwa. Umntu okhaliphile uya kuqonda ukuba ngoku ayikho ixesha. Ukuba uyaqhubeka ukugxininisa ekusondelene, qedela umhla (ndixelele ngokuqinisekileyo ukuba lixesha lokuba uhambe). Ukuba unemibuzo, sebenzisa amathiphu 1 okanye 2.
Oko kuthethayo akufanelekanga
Ngaphandle ngqo, musa ukudibanisa ukugatya kwakho nendoda ethile. Iphutha eliqhelekileyo isigwebo esithi "andiyiva nto kuwe", "Andiqinisekanga ngawe", "Andikhange ndikhange kuwe," njl. Njalo inzame kwingxoxo engenangqumbo iya kumnceda umntu kwaye inokulimaza ukuzithemba kwakhe. Indlela efanelekileyo yokugwema ukuthetha ngesondo ngosuku olufanelekileyo akuyi kudala imeko ephosakeleyo (kungekhona ukuba yedwa egumbini elivaliweyo, ukuba ungathinteki). Kodwa ukuba ngaba kunjalo, gwema amabinzana njengempikiswano:
"Namhlanje ndinayo le" le ntsuku "- amadoda sele ayeke ukukholelwa esi sizathu esithandwayo;
"Andifundanga" - ukuvalwa kunye nokungahambisani nokuqatshelwa kokukhanyela, emva koko kunzima ukuza ngokuqhubekayo okunengqiqo;
"Ufuna kuphela oku" - ibinzana elicasula abantu, libale ngokusisigxina.
Umama-mkhwenkwe uyisithandwa sam nesithandwa
Ubudlelwane beentombi nabantu abadala
Inkxalabo yobudlelwane bosapho 1 unyaka
Ukhuphiswano "Umfanekiso ovela kwiphepha" ukusuka kwisitoreji se-intanethi yaseLamoda.ru
Indlela yokuphelisa ukukhathala okungapheliyo
Inobungozi kunye nenzuzo yokutya "yokuphila"
Yintoni abafana abathanda ngayo
Okroshka emanzini ngeviniga
Ubuhlobo obusondeleyo nobuhlobo phakathi kwabantu
Amanqwanqwanqwa angamadoda amaninzi athathekayo kwi-2016: zeziphi iinwele eziza kusenza zifake imfashini, iAntumn-Winter 2015-2016, ifoto
Uyazi njani ukuba uthanda umntu emva komhla kunye naye?
Ukukhuthaza ukuziphatha komntwana